IVivvanse vs. Ritalin: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe - Izidakamizwa Vs. Umngani | Julayi 2021
Cindezela Inkampani, The Checkout Umphakathi Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Inkampani, Izindaba Ukuphuma Imfundo Yezempilo, Izindaba Izidakamizwa Vs. Umngani Imfundo Yezempilo Inkampani, Imfundo Yezempilo Umphakathi, Ukuphila Kahle Inkampani Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Izilwane Ezifuywayo
Main >> Izidakamizwa Vs. Umngani >> IVivvanse vs. Ritalin: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
IVivvanse vs. Ritalin: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
Ukunakwa kokushoda kokungasebenzi kahle (ADHD) kuthinta 6.1 million izimpilo e-United States. Ukuhlonza iziguli ezine-ADHD kunezinyathelo eziningi. Iziguli zingakhombisa izimpawu ezinjengokungalaleli lapho kukhulunywa ngqo, ukwehluleka ukuhlelelwa ukuqedela imisebenzi noma ukukhohlwa emisebenzini yansuku zonke. Iziguli ezine-ADHD zingadinga indawo yokuhlala ekhethekile kuzilungiselelo ezifana nasekilasini ukuze zenze umsebenzi wazo ngempumelelo. Udokotela kuphela ongathola i-ADHD, kepha uma kutholakala ukuxilongwa, kunezinketho zokwelashwa ukusiza lezi ziguli ukuthi zibone ikhwalithi ephezulu yokusebenza emisebenzini yansuku zonke.
Enye yezinhlobo ezivame kakhulu zokwelashwa kwe-ADHD yisigaba semithi eyaziwa ngokuthi izikhuthazi zesistimu yezinzwa (i-CNS). IVyvanse (lisdexamfetamine) neRitalin (methylphenidate) yimithi emibili kuleli klasi. Ezinye izikhuthazi ezaziwayo zifaka phakathi i-Adderall / Adderall XR (amphetamine salt), Concerta (methylphenidate-release-release), Daytrana (methylphenidate), neFocalin / Focalin XR (dexmethylphenidate). Kunezinketho zokwelashwa ezingezona ezikhuthazayo ze-ADHD. Lokhu kufaka phakathi iStrattera (atomoxetine) ne-Intuniv ER (guanfacine).
Uyini umehluko omkhulu phakathi kukaVyvanse noRitalin?
I-Vyvanse (Yini i-Vyvanse?) Iyisistimu yezinzwa evuselelayo esetshenziswa ekwelapheni i-ADHD kanye nenkinga yokudla ngokweqile. Indlela eqondile yokuthi uVyvanse uziphatha kanjani lezi zinkinga ayaziwa. IVivvanse iguqulwa ibe yimetabolite yayo esebenzayo, i-dextroamphetamine. Ama-Amphetamines ashukumisa ukukhishwa kwama-catecholamine, njenge-norepinephrine ne-dopamine, ku-synapse ye-neuron. Siyazi ukuthi la ma-neurotransmitters adlala indima ebaluleke kakhulu kwimizwa, kuthinte, nasekugxileni.
I-Drug Enforcing Agency (DEA) ibheka uVyvanse njengesidakamizwa se-schedule II sesidakamizwa. Lokhu kungenxa yamandla ayo aphezulu okuhlukumeza, ngakho-ke kungahle kube nemikhawulo nemikhombandlela yokuthola iVyvanse eyehluka ngombuso. I-Vyvanse iyi-capsule yomlomo etholakala ku-10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg, no-70 mg. IVyvanse iyatholakala kuthebhulethi ehlafunwayo ngamandla afanayo nokwakhiwa kwe-capsule.
I-Ritalin (Yini i-Ritalin?) Ibuye ibe yisistimu yezinzwa ephakathi evuselela ukwelashwa kwe-ADHD ne-narcolepsy. Indlela esebenza ngayo nayo ayiqondakali ngokuphelele. URitalin uyi-CNS evuselela kakhulu. Esikhundleni sokubangela ukukhululwa kwama-catecholamines, kuvimbela ukuphinda kuthathwe kwalabo bantu be-neurotransmitters ku-neuron synapse. Umphumela wokugcina ushiya i-dopamine yamahhala kanye ne-norepinephrine ku-neuron synapse.
URitalin ubizwa nangokuthi a IShedyuli II yezidakamizwa yi-DEA ngenxa yamandla ayo okuhlukumeza. Itholakala kumathebulethi akhishwa ngokushesha ku-5 mg, 10 mg, naku-20 mg amandla. Iphinde itholakale ekwakhiweni kwe-capsule ende esebenza isikhathi eside ku-10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, naku-60 mg amandla.
Umehluko omkhulu phakathi kukaVyvanse noRitalin
Isigaba sezidakamizwa Isistimu yezinzwa eziphakathi ivuselela Isistimu yezinzwa eziphakathi ivuselela
Isimo somkhiqizo / ejwayelekile Umkhiqizo kuphela I-Brand ne-generic iyatholakala
Ngubani igama elijwayelekile? I-Lisdexamfetamine I-Methylphenidate
Izidakamizwa zingena ngaziphi izinhlobo? I-capsule yomlomo nethebulethi ehlafunwayo Ithebhulethi yomlomo ekhishwa ngokushesha kanye ne-capsule yomlomo esebenza isikhathi eside
Uyini umthamo ojwayelekile? 70 mg kanye ngosuku 10 mg tablet kabili ngosuku
Yelashwa isikhathi esingakanani? Isikhathi eside (izinyanga kuya eminyakeni) Isikhathi eside (izinyanga kuya eminyakeni)
Ubani ovame ukusebenzisa umuthi? Izingane, intsha kanye nabantu abadala Izingane, intsha kanye nabantu abadala
Ufuna intengo engcono kakhulu kuVyvanse?
Bhalisela izexwayiso zentengo kaVyvanse bese uthola ukuthi intengo ishintsha nini!
ingahlala isikhathi esingakanani ikhala eligijimayo
Izimo eziphathwe nguVyvanse noRitalin
UVyvanse noRitalin basetshenziswa ngamunye ekwelapheni i-ADHD. IVyvanse ivunyelwe ezinganeni ezineminyaka esukela kwengu-6 ubudala, kanti uRitalin uvunyelwe ezinganeni ezineminyaka yobudala emi-3 ubudala. Zombili lezi zidakamizwa zingasetshenziswa ebusheni nakubantu abadala.
UVyvanse uphethe inkomba yokwelashwa ekuphazamisweni kokudla ngokweqile. Ukudla ngokweqile kubonakala ngokudla ngokweqile ngesikhathi esisodwa. Akudalwa njalo yisifo esiyimbangela. Abasubathi abadla inani elikhulu lama-calories ngaphambi komcimbi wezemidlalo badla ngokweqile, kepha ngeke badinge ukwelashwa. Ngezinye izikhathi, ukuzitika ngotshwala kuwuphawu lokuphazamiseka kwengqondo okuyisisekelo, kanti uVyvanse uvunyelwe ukwelapha ukuphazamiseka kokudla ngokweqile.
URitalin uvunyelwe ekwelashweni kwesifo sokudlikiza. I-narcolepsy yisifo esibonakala ukozela ngokweqile emini, imvamisa ngenxa yesifo sokulala esingamahlalakhona. Imiphumela evuselelayo kaRitalin yaziwa okungenani ngokuqeda kancane lo kozela.
Lokhu akuhloselwe ukuthi kube yishadi elihlanganisa konke ukusetshenziswa kwazo zonke lezi zidakamizwa ezimbili. Thintana nodokotela wakho mayelana nakho konke ukusetshenziswa kukaVyvanse noRitalin.
Isimo UVyvanse URitalin
I-ADHD Yebo Yebo
Ukuphazamiseka kokudla ngokweqile Yebo Akunjalo
Ukuxokozela Akunjalo Yebo
Ukukhathala okukhulu Akunjalo Ngaphandle kwelebula
Ukucindezeleka okukhulu Akunjalo Ngaphandle kwelebula
Ngabe uVyvanse noma uRitalin usebenza kangcono?
Ngo-2017, a ukubuyekeza okuphelele kushicilelwe ukuqhathanisa imiphumela yezilingo ezingama-34 ezingahleliwe ngokuqhathanisa izindlela zokwelashwa ezahlukahlukene ze-ADHD, kufaka phakathi izithako ezisebenzayo eVyvanse naseRitalin. Imiphumela yalokhu kuhlaziywa ithole ukuthi izimpawu ze-ADHD bezithuthukiswe kakhulu ezigulini ezithatha uVyvanse, yize zonke izindlela zokwelashwa bezisebenza. Omunye umphumela obalulekile ukhombisa ukuthi inhlanganisela ekhipha ngokushesha i-methylphenidate, efana neRitalin, yayiyeyona ebekezeleleke kakhulu. Ukucabanga kokugcina okubalulekile kungaba izindleko zokwelashwa. URitalin ubelokhu ejwayelekile iminyaka eminingi futhi ubiza kakhulu kuno-Vyvanse, otholakala kuphela ekwakhiweni kwegama lomkhiqizo.
Umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo kuphela onganquma ukuthi ikuphi ukwelashwa okulungele wena. Ngezizathu ezingaziwa, ezinye izindlela zokwelashwa zingase zingasebenzi kahle kwezinye iziguli kunezinye. Uchwepheshe wakho wezokunakekelwa kwempilo uzosebenza nawe ukuthola ukwelashwa okuphumelela kakhulu.
Ukuqhathaniswa nokuqhathaniswa kwezindleko kweVyvanse vs. Ritalin
IVyvanse ngumuthi kadokotela ovame ukumbozwa umshuwalense wezohwebo. Ukuhlanganiswa ngamasu we-Medicare kungahluka noma kudinge ukwenziwa okukhethekile. Amanani aphuma ephaketheni weVyvanse 70mg angaba ngu- $ 471. Isigqebhezana esivela kwaSingleCare singaletha intengo ku- $ 322 kuma-pharmacy akhethiwe.
URitalin umuthi kadokotela ovame ukumbozwa umshwalense wezohwebo. Ukuhlanganiswa ngamasu we-Medicare kungahluka noma kudinge ukwenziwa okukhethekile. URitalin uvame ukuthengisa cishe u- $ 85, kepha ngesigqebhezana esivela kwa-SingleCare, iziguli zingathola i-genital Ritalin ngemali engango- $ 15 nje kuphela.
Imbozwe ngokujwayelekile yi-Medicare? Mhlawumbe ngokugunyazwa kwangaphambili Mhlawumbe ngokugunyazwa kwangaphambili
Umthamo ojwayelekile 30, 70 mg amaphilisi 30, 10 mg amaphilisi
I-Medicare copay ejwayelekile Okuguqukayo Okuguqukayo
Izindleko ze-SingleCare $ 322- $ 341 $ 15- $ 55
Imiphumela emibi ejwayelekile yeVyvanse vs. Ritalin
IVyvanse neRitalin zombili izikhuthazi ze-CNS, ngakho-ke zinohlu olufanayo lwemiphumela emibi engaba khona. Imibhalo evela ku-Food and Drug Administration (FDA) ayichazi imvamisa yemicimbi emibi evela eRitalin. Cishe i-1 kuzo zonke iziguli ezi-2.5 ezithatha iVivvanse zihlangabezana nokuqwasha. Ngalesi sizathu, iVivvanse nezinye izinto ezikhuthazayo kufanele zithathwe ngaphambi kosuku.
Eminye imiphumela emibi ehlobene nakho konke uVyvanse noRitalin ifaka phakathi ukuncipha kwesifiso sokudla, ubuhlungu besisu esingaphezulu, isicanucanu nokuhlanza. Le miphumela emibi ingaholela ekulahlekelweni kwesisindo okukhulu, futhi iziguli kufanele ziqashwe ngalo mphumela.
Lokhu akuhloselwe ukuthi kube uhlu olubanzi lwemiphumela emibi. Sicela uthintane nosokhemisi wakho noma uchwepheshe wezokunakekelwa kwempilo ukuthola uhlu oluphelele lwemiphumela emibi.
Ukuqwasha Yebo 39% Yebo Akuchaziwe
Ukwehla kwesifiso sokudla Yebo 22% Yebo Akuchaziwe
Ubuhlungu besisu phezulu Yebo 12% Yebo Akuchaziwe
Ukuthukuthela Yebo 10% Yebo Akuchaziwe
Ukuhlanza Yebo 9% Yebo Akuchaziwe
Ukwehla kwesisindo Yebo 9% Yebo Akuchaziwe
Isicanucanu Yebo 6% Yebo Akuchaziwe
Umlomo owomile Yebo 5% Yebo Akuchaziwe
Isiyezi Yebo 5% Yebo Akuchaziwe
Umthombo: Vyvanse (I-DailyMed) URitalin (I-DailyMed)
Ukusebenzisana kwezidakamizwa zikaVyvanse vs.Ritalin
Ukuhlanganiswa kwe-Vyvanse noma i-Ritalin ene-monoamine oxidase inhibitors kuyaphikiswa. Le nhlanganisela yale mithi akufanele isetshenziswe ezigulini. Ama-anti-depressants e-MAOI anciphisa i-amphetamine metabolism, akhuphule umphumela we-amphetamine ekukhishweni kwe-norepinephrine namanye ama-monoamine avela emaphethelweni ezinzwa abangela ikhanda nezinye izibonakaliso zenkinga yomfutho wegazi ophezulu.
Ukusetshenziswa kweVyvanse noma iRitalin enezinhlobo ezahlukahlukene ze-serotonergic kungakhuphula amathuba okuba nesifo se-serotonin. Lesi sifo singaholela ekutheni isiguli sizizwe sikhungathekile, sinesiyezi, futhi sikhuphuka izinga lokushaya kwenhliziyo. Ama-serotonergic agents afaka izinhlobo zokulwa nezidakamizwa ezinjenge-serotonin reuptake inhibitors ekhethiwe, ama-tricyclic antidepressants, kanye nabaphikisi be-5HT3.
URitalin othathiwe uyaziwa ukuthi ulwa nemiphumela yokulwa nomfutho wegazi ophakeme wemithi ejwayelekile yomfutho wegazi efana ne-lisinopril, benazepril, losartan, ne-irbesartan. Iziguli ezinengcindezi ephezulu yegazi kufanele zigweme iRitalin.
Uhlu olulandelayo aluhloselwe ukuba luhlu oluphelele lokusebenzisana kwezidakamizwa. Kungcono ukubonisana nodokotela wakho noma usokhemisi ukuthola uhlu oluphelele.
Izidakamizwa Isigaba Sezidakamizwa UVyvanse URitalin
I-Linezolid I-Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) Yebo Yebo
I-Escitalopram I-serotonin reuptake inhibitors ekhethiwe (SSRIs) Yebo Yebo
I-Desvenlafaxine I-norepinephrine reuptake inhibitors ekhethiwe (SNRIs) Yebo Yebo
Frovatriptan Abaphikisi be-5HT3 (iTriptans) Yebo Yebo
I-Fosinopril I-Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors Akunjalo Yebo
Olmesartan Ama-Angiotensin receptor blockers (ama-ARB) Akunjalo Yebo
Nebivolol Ama-beta blockers Akunjalo Yebo
Izexwayiso zikaVyvanse noRitalin
UVyvanse noRitalin bangama-narcotic esheduli II, ngakho-ke anamandla aphakeme kakhulu okuhlukumeza nokusetshenziswa kabi. Le mithi kufanele ithathwe njengoba iqondisiwe, futhi iziguli kufanele ziqashwe ngeso lokhozi ngabahlinzeki bazo bezokunakekelwa kwezempilo ngenkathi bekule mithi.
Ukufa okungazelelwe, isifo sohlangothi nokuboshwa kwenhliziyo kuye kwabikwa ezigulini ezithatha izikhuthazi ze-CNS, noma ngemithamo enconyiwe. Ukufa okungazelelwe kwenzeke ezinganeni nasebusheni abanezinkinga zenhliziyo. Ngalesi sizathu, ukusetshenziswa kukaVyvanse noRitalin kufanele kugwenywe ezigulini ezinomlando wesifo semithambo yenhliziyo noma ezinokukhubazeka kwenhliziyo okwaziwayo.
ubani igama elijwayelekile le-tylenol 3
Izikhuthazi ze-CNS zingakhuphula ukuphazamiseka kokuziphatha ezigulini ezinokuphazamiseka kwengqondo okukhona. Lezi ziguli kufanele zibhekwe ngeso lokhozi uma kudingeka izikhuthazi ze-CNS. Iziguli ze-bipolar zingathola iziqephu ezixubekile noma ze-manic ngenkathi zikhuthaza i-CNS.
Imibuzo ebuzwa njalo ngeVyvanse vs. Ritalin
IVyvanse ngumuthi kadokotela osetshenziswayo ekwelashweni kokuphazamiseka kokungasebenzi kahle kanye nokuphazamiseka kokudla ngokweqile. I-Vyvanse iyisistimu yezinzwa ezikhuthazayo futhi iyisidakamizwa esilawulwa yi-schedule II njengoba ihlukaniswe yi-DEA. Itholakala njenge-capsule noma ithebhulethi ehlafunwayo ngamandla asukela ku-10 mg kuye ku-70 mg.
URitalin ngumuthi kadokotela osetshenziswayo ekwelapheni ukunakekelwa kokushoda kokungasebenzi kahle kanye ne-narcolepsy. I-Ritalin iyisistimu yezinzwa ekhuthazayo futhi iyisidakamizwa esilawulwa ngohlelo II njengoba sihlukaniswa yi-DEA. Itholakala njengethebhulethi ekhishwa ngokushesha ku-5 mg, 10 mg, naku-20 mg amandla. Kuyatholakala futhi njengokwakhiwa okuthatha isikhathi eside kumaphilisi omlomo asukela ku-10 mg kuye ku-60 mg.
Ngabe uVyvanse noRitalin bayafana?
Ngenkathi bobabili uVyvanse noRitalin belapha i-ADHD futhi bahlukaniswa njengezikhuthazi ze-CNS, abafani. IVyvanse isebenza ukukhulisa ama-catecholamine ku-synapse ye-neuronal ngokushukumisa ukukhishwa kwawo, kuyilapho iRitalin ivimba ukuphinda kuthathwe ama-catecholamine ukuze ishiye ngempumelelo ama-catecholamines wamahhala ku-synapse ye-neuronal.
Ngabe uVyvanse noma uRitalin ungcono?
Kokubili uVyvanse noRitalin kufakazelwe ukuthi kuyasebenza ekwelapheni i-ADHD. Ucwaningo lukhombisa ukuthi uVyvanse angakhombisa ukuthuthuka okukhulu kwezimpawu zesifo, kepha uRitalin uyonga kakhulu futhi uholela ezingeni eliphansi lemiphumela emibi.
Ngingasebenzisa uVyvanse noma uRitalin ngenkathi ngikhulelwe?
UVyvanse noRitalin babhekwa njengesigaba C sokukhulelwa yi-FDA. Lokhu kusho ukuthi bekungekho izifundo ezanele zabantu zokunquma ukuphepha. Ukusetshenziswa kwama-amphetamine ngesikhathi sokukhulelwa kungaholela engcupheni eyandayo yokuzalwa ngaphambi kwesikhathi kanye nesisindo sokuzalwa esiphansi. Izingane ezisanda kuzalwa zingathola izimpawu zokuhoxa. Le mithi kufanele isetshenziswe kuphela lapho izinzuzo zidlula ngokusobala izingozi.
Ngingasebenzisa uVyvanse noma uRitalin ngotshwala?
Ukusetshenziswa kotshwala kungakhuphula ukugxila kwegazi le-serum yezidakamizwa ezihlobene ne-amphetamine, ngakho-ke utshwala kufanele bugwenywe lapho kule mithi.
Yisiphi isidakamizwa esiseduze kakhulu kuVyvanse?
IVivvanse iguqulwa emzimbeni ibe yimetabolite yayo esebenzayo, i-dexmethylphenidate. I-Dexmethylphenidate iyisithako esisebenzayo ekwakhiweni kweFocalin.
Uyini umuthi omusha we-ADHD?
I-Jornay ukwakhiwa okusha kokulibaziseka kwe-methylphenidate. Kuyingqayizivele ngoba uyithatha ebusuku ngaphambi kokulala, futhi ngokukhishwa okubambezelekile, umuthi osebenzayo ukhishwa emathunjini ekuseni. Kukhonjisiwe ukuthi kubangele ukuqwasha okuncane kunokwakhiwa kwe-methylphenidate endala.
Imiphi imishanguzo ye-ADHD efana neVyvanse?
ILisdexamfetamine, isithako esisebenzayo kuVyvanse, siguqulwa emzimbeni sibe yi-dextroamphetamine. I-Dextroamphetamine iyisithako esisebenzayo ekwakhiweni kwe-Adderall. Ukwakhiwa kwe-Adderall XR, kanye nemithi yabo ejwayelekile, kuvamise ukuba kube umthamo owodwa wansuku zonke ofana neVivvanse.
Ingabe ikhona enye indlela eshibhile kuneVyvanse?
I-Focalin ne-Focalin XR yi-metabolites esebenzayo ye-Vyvanse futhi inezakhi ezijwayelekile emakethe. Lokhu kuvame ukumbozwa kahle ngumshuwalense. I-SingleCare iphinde inikeze ngamakhadi wokonga kulezi zakhiwo.
Yini ama-carbs? Konke odinga ukukwazi ngama-carbohydrate
uyini isilinganiso esiphezulu se-zoloft
ingabe i-apula cider uviniga ibulala ukhunta lwe-nail
uyini umthamo ophephile ophakeme we-melatonin
Ngingathatha ibuprofen engakanani ngezinhlungu emuva
yini ku-viagra ekwenza ube nzima
ngingalapha kanjani ukutheleleka kwemvubelo ekhaya